သူငယ်ချင်း ၂ ယောက် - Owl Myanmar News
ကိုလည်းတွေ့ ရင် အားကျ ကာ စိတ်ထဲအကြီးအကျယ်ပစ်မှားတတ်လာသည်..ကျနော်ကလည်း ကျနော် ပစ်မှားသည့် ဆော်များကိုလည်း နိုင်ဝင်းအားပြောပြတတ်သလို..နိုင်ဝင်းကလည်းသူစိတ်ထန်သည့်မိန်းမ များ ကိုလည်း ကျနော့ကို ပြောပြတတ်သည်… ဟိုတယ်ကလည်းနေစရာပေးသဖြင့်ကျနော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးအိမ်မပြန်ကြတော့..အမေ့ကိုတော့လခ ပေးသည့်အချိန်က လွဲ၍ မပြန်ကြဘဲ အလုပ်မှာပျော်နေကြသည်။ ဟိုတယ်မှာလည်း သူငယ်ချင်းများရလာပါတယ်. တစ်ရက် မန်နေဂျာကြီး မှ ကျနော်တို့ နှစ် ယောက်ကိုခေါ်သဖြင့် သူ့ရုံးခန်းသို့သွားရသည်…သူဌေးလည်း ရောက်နှင့် နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ သူဌေးမှာ မြန်မာပြည်မွေးတရုပ်လူမျိုး ဖြစ်ပါသည်။ သူမျက်နှာထားကို ကြည့်လိုက်ရတာနဲ့ အားလုံးက ကြောက်ရ မည့် ရုပ်ရည်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ မင်းတို့ကို ယုံကြည်စိတ်ချလို့ အခု မာဆတ်၂ခန်းမှာအလုပ်ခိုင်းမယ်.. လို့ ဂျာကြီးက စပြောပါတယ်.. ဟုတ်ကဲ့..ရပါတယ် ကျနော်တို့ ၂ ယောက် တစ်ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက်ကြည့်လိုက်ကြပါတယ်..ကျနော်တို့ ဟိုတယ်မှာက အတွဲ တွေလည်းလာကြတာများတယ်..အချိန်ပိုင်းအတွဲတွေ ဆိုတာ ခနခန လာလွန်းလို့ ကျနော်တို့ အားကျခဲ့ရတာ တွေ …ကိုယ်လည်းအဲလို ကာမအရသာခံစားမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဆန္ဒတွေကို မနည်းထိန်းနေရတဲ့ ကျနော်တို့ စိတ်ထဲ လန့်သွားမိပါတယ်..ရင်လည်းခုန်လာပါတယ်..
နောက်တစ်နေ့ရောက်တော့ ဟိုတယ်ကို အလျှိုအလျှိုရောက်လာကြတာ… ကောင်မလေး ၁၀ ယောက်လောက် ပေါ့..ထိုင်စောင့်ခိုင်းတားပြီး ဂျာကြီးအခန်းထဲ ကိုအလှည့်ကျလွတ်ရတာပေါ့..လာတဲ့ကောင်မလေးတွေကို ကြည့်လိုက်… စိတ်ထဲကပစ်မှားလိုက်နဲ့ပေါ့… ကောင်မလေးတွေထဲက ပုံမလာပန်းမလာ ၂ ယောက်လောက်ကိုမရွေးဘဲနဲ့ ကောင်မလေး ၈ ယောက်ကိုရွေးလိုက် တယ်လို့သိရတယ်,, ကျန်တဲ့ကောင်မလေးတွေက အလုပ်ခန့်ထားလို့ ဟိုတယ်မှာနေရတယ်.. မာဆတ်ကောင်မလေးတွေထဲမှာကျနော်က ပုသိမ်ကလာတဲ့ အေးအေးခိုင်ကိုစိတ်ဝင်စားမိသလို…နိုင်ဝင်းကလည်း ပြည်ကလာတဲ့ ကုလားဆင်ကောင်မလေး ကြည်ကြည် လွင် ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်.. ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်က အဲအချိန်မှာ.. အပြင်မှာ ကောင်မလေးတွေနဲ့အတူတူအိပ်ပီးဘီ… တစ်လတစ်ခါ လောက်တော့ နေဖြစ်တယ်… မဟုတ်တာလုပ်ရင် ကျနော်ကလည်းသူပါမှ လုပ်တယ်..သူကလည်းကျနော်ပါမှ လေ…တခါတခါ… ကောင်မလေးတစ်ယောက်တည်းကို ကျနော်တို့ ၂ ယောက်စလုံးက2in 1 ဆွဲတာလည်း ရှိတယ်… ပြောချင်တာက နှာထလာရင် ကျနော်တို့ ၂ ယောက်စလုံးအရှက်ကိုမရှိတာ..သူ ကောင်မလေး ကို စားရင်လည်းကျနော်က ဘေးကကြည့်သလို..ကျနော်ကောင်မလေးကိုစားရင်လည်း သူက ဘေးက ကြည့် တယ်.. တူတူစားရတဲ့အခါ မရှက်ကိုမရှက်တော့တာ..အိပ်တဲ့ကောင်မလေးတွေက လိုင်းတွေ ပါ.. ကိုယ့်ရည်းစားတော့ မဟုတ်သေးဘူး…ဒါကြောင့်လည်း ကျနော်တို့ ၂ ယောက်မရှက်ကြတာလို့ထင်တယ် မာဆတ်ခန်းဖွင့်မှ ကျနော်တို့ လည်း ရန်ကုန်မြို့မှာ ကာမ သောင်းကျန်းသူတွေများတယ်..ဆိုတာကျနော်တို့ သိလာ ရတယ်…
hand play လုပ်ပေးခဲ့ရတာတွေ ကို ကျနော်တို့သိပေမဲ့ ခင်လာတာကြာတော့လည်း.. သူငယ်ချင်းတွေဆိုတော့ အထင်သေးတာမျိုးလည်းလုံးဝကို မဖြစ်တာ..ကျနော်တို့ဆိုင်မှာဆီလိမ်းမာဆတ်ကိုလုပ်တဲ့ ကောင်မ လေး ၁၂ ယောက်လောက်ရှိတယ်..ကျနော်တို့ အကုန်ကိုချောင်းဘူးတယ်.. လာတဲ့ ဘဲ ကြီးတိုင်းလိုလိုက လက်နဲ့လုပ်ပေးတာကိုခံကြတယ်… ဘဲက ရစ်တယ် ဆိုရင် ကျနော်တို့က ကြားဝင်ပေးရတာလည်းရှိပေမဲ့နည်းပါတယ်.. ဧည့်သည်ပါးရင် ကျနော်တို့ထိုင်စကားပြောနေတတ်တယ်… ဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်း တွေပေါ့… အေးအေးခိုင်နဲ့ ကျနော်ကစကားပြောတာများတယ်..သူ့အိမ်အကြောင်း..သူ့မိသားစုအကြောင်းပေါ့… ကျနော်လည်း သူ့ကိုပိုခင် လာတယ်..တိုတိုပြောရရင် ချစ်သူဘဝကို ရောက်ခဲ့တယ်… ကြည်ကြည်လွင်နဲ့နိုင်ဝင်းလည်း ချစ်သူမဖြစ်သေးပေမဲ့ တော်တော်ကို တွဲဖြစ်တယ်လို့ပြောရမယ်.. ချစ်သူဘဝရောက်ပေမဲ့ကြည်ကြည်လွင်ကို ကျနော်မနမ်းဘူးသေးဘူး..ကျန်တာကလည်းဘာမှ မလုပ်ရသေးဘူး.. သေချာတာကတော့သူကအပျိုစစ်သေးတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျနော်သိတယ်.. လာတဲ့ဧည့်သည်တွေကို သူလက် နဲ့ လုပ်ပေးတာက တော့မုန့်ဖိုးရချင်လို့ဆိုတာ ကျနော်သိတယ်..ထူးဆန်းတာက ကျနော်စိတ်ထဲ သဝန်တို တာ မျိုး တော့မရှိဘူး..အလုပ်သဘောလို့ဘဲ သဘောထားတယ်..ဒါနဲ့နိုင်ဝင်းကို ပြောပြတယ်..
ငါ နဲ့ကြည်ကြည်နဲ့ ဖြစ်နေပီ..သူငယ်ချင်း ငါသိတယ်..မင်းတို့ ကို ကြည့်တာနဲ…မင်းအတည်လား..အပျော်လား… အင်း..အတည်လို့တော့ထင်တာဘဲ…သူနဲ့ငါနဲ့နားလည်မှုရှိတယ်… အင်း…ကြည်ကြည်ကစိတ်ထားကောင်းပါတယ်… သဘောကောင်းတယ်…မင်း နဲ့အဆင်ပြေမှာပါ… အဲနေ့က သူနဲ့ အေးအေးခိုင်လည်း ချစ်နေတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတယ်.. အေးအေးနဲ့လည်း သူလည်း ပြေလည်မယ် လို့ ထင်ပါတယ် သူလည်း အေးအေးခိုင်ရော ကြည်ကြည်ကို ဧည့်သည်တွေကို လက်နဲ့လုပ်တာ ချောင်းဘူးတာဘဲလေ….ကျနော်တို့ ၂ ယောက်စလုံးက ကိုယ့်ချစ်သူတွေက တခြားသူတွေရဲ့ငပဲတွေကိုကိုင်ပီး လက်နဲ့လုပ်ပေးရတာကို ဘယ်လိုမှ မနေဘူး.. ၂ နှစ်လောက်အဲဒီဟိုတယ်မှာအလုပ်လုပ်ဖြစ်တယ်… ကျနော်က အမေ့ဖက်က အမျိုးတစ်ယောက်ရဲ့ ကျေးဇူး ကြောင့် ကားတစ်စီးဝယ်ဖြစ်တယ်..တက်ဆီ ဆွဲဖြစ်တယ်… နိုင်ဝင်းကလည်းကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ သူဌေးရဲ့ လူယုံ ဖြစ်သွားတယ်…သူနဲ့ကျနော်နဲ့ကတော့တွေ့ဖြစ်တယ်.ကြည်ကြည်နဲ့အေးအေးတို့ကတော့ ဟိုတယ်မှာဘဲ ကျန်ခဲ့ တယ်.. ကျနော်တို့နှစ်ယောက်တွေ့ရင် အိမ်ထောင်ပြုဖို့ကိစ္စလည်းပြောဖြစ်တယ်…ခက်တာက ကျနော်တို့နှ စ်ယောက် စလုံးက အိမ်တစ်လုံးဝယ်နိုင်ဖို့ကိုပိုက်ဆံမရှိကြသေးဘူးလေ..ကြည်ကြည်နဲ့ အေးအေးကို လည်း ဟိုတယ်မှာ ဆက်မလုပ်စေချင်တော့ဘူး… သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တိုင်ပင်ပီးတော့ မြို့စွန်က တိုက်ခန်းကျဉ်းလေးတစ်ခု နှစ်ချုပ်နဲ့.. ငှားဖြစ်တယ်.. အိမ်ဌားခကို တစ်ယောက်တစ်ဝက် ခံတာပေါ့.. အတိုချုံးပြောရရင်… ကြည်ကြည်နဲ့ ကျနော်နဲ့ လက်ထပ် လိုက် ကြတယ်..နိုင်လင်းကတော့..ကျနော်တို့ယူပီး နောက်တစ်လ လောက်မှ လက်ထပ်ဖြစ်တယ်
(အေး… သာယာတာပေါ့ကွာ…အခုလေးတင်.. ညစာစားထားတာလေ..ထမင်းတော့မဟုတ်ဘူး )လို့ပြောတော့ ကြည်ကြည်က ရှက်လို့ မျက်နှာရဲနေတာဘဲ… ကြည်ကြည်က အောက်က ဘရာဇီယာမပါဘူး… စကတ်ကလည်း မရှည်ဘူးဆိုတော့..ကြည်ကြည်ရဲ့ပေါင်တွေ တစ်ဝက်လောက်ပေါ်နေတယ်..ယောက်ျားတစ်ယောက်ရှေ့မှာ ကိုယ့်မိန်းမ ပေါင်တစ်ဝက်လောက်ပေါ်နေတာကို ကျနော် ဖီလင်လာတယ်..နိုင်ဝင်းဆိုတဲ့ကောင်က ငယ်ပေါင်းဘဲ လေ… မကြည့်ဘဲဘယ်နေမှာလည်း..ကျနော့်မိန်းမမို့လိုသာ..သူမကြံတာပါ..ကြည့်တာက တော့ ကြည့်တောပေါ့ နိုင်ဝင်းက အရက်နဲ့ အမြီး ဝယ်လာတယ်…ကြည်ကြည်ကို နိုင်ဝင်းက သောက်မလားလို့ ပြောတော့ ကြည်ကြည်က ကျနော့မျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်သောက်တယ်….နဲနဲသောက်လိုက်လေလို့ ကျနော်ကပြောတော့ ကြည်ကြည်လည်း သောက်ပီးမျက်နှာရှုံမဲ့ပီးသောက်ဖြစ်တယ်….ပထမ တစ် ခွက်ပီးတော့ဒုတိယတခွက်သောက်ဖြစ်သွားတယ်… အရက်ကလေးဝင်လာတော့စကားဝိုင်းကပိုစိုပြေလာတယ်..ပိုရင်းနှီးလာတယ်…ကြည်ကြည်နဲ့ နိုင်ဝင်းလဲ..စလိုက် နောက်လိုက်ပြောင်လိုက်ပေါ့… နိုင်ဝင်းကလည်းမူးလာတယ်…(ကြည်ကြည်..စိတ်မဆိုးနဲ့..နင်ဟိုတယ်မှာ လုပ်တုန်းကနင့်ယောကျားနဲ့ငါ နင့်ကိုချောင်းကြည့်ဘူးတယ်ဟ) (ကိုနိုင်ဝင်းကလည်း..တော်တော်ဆိုးတာဘဲနော်..) ကြည်ကြည်က ရီပြီး ပြောသာပြောနေရတာ.. မျက်နှာကိုနီရဲနေတာဘဲ နိုင်ဝင်းဘာကိုဆိုလိုမှန်းကျနော်လည်းသိတယ်…ကြည်ကြည်လဲသိတယ်… ရီကြ..မောကြနဲ့ ကျနော်တို့ ညပိုင်းကုန်သွားတယ်…ကြည်ကြည်ကတော့တော်တော့ကိုမူးလာတယ်… ……
(အင်း..အကို စိတ်ဆိုးသွားပလား) (မဆိုးဘူး………….) ကျနော်လိုးတာပိုမြန်လာတယ်…ကြည်ကြည်လဲပိုခံစားနေတယ်.. (မှုတ်ပေးဘူးလား …..)(အင်း….) (မှုတ်ပေးဘူးလား… အင်းလို့မပြောနဲ…..) (မှုတ်ပေးဘူးတယ်…) (အိုး………………..) (မှုတ်ပေးဘူးလား…) (မှုတ်ပေးဘူးတယ်….) (ထပ်ပြော..ကြားချင်တယ်….သူများလီးတွေကိုမှုတ်ပေးဘူးလား) (မှုတ်ပေးဘူးတယ်…) သူများလီးတွေကိုမှုတ်ပေးခဲ့တဲ့ကျနော့်မိန်းမနှုပ်ခန်းတွေကိုနမ်းမိတယ်..(ချစ်တယ်…ကွာ…. ကြည်ကိုချစ်တယ်ကွာ..) (အကို့ကိုလည်းကြည်ချစ်တယ်…)အဲနေ့က ကျနော်အရမ်းလိုးသလို ကြည်လည်း ပီးတာ ၃ ခါတေင်ပြီးတယ်… ကျနော်က ကျနော့မိန်းမကို ဘာဝတ်ဝတ် ကျေနပ်တယ်..အဖွားကြီးလေးလို မဝတ်ရင်ပီးရောလေ တက်ဆီလေးဆွဲတာကလည်း အဆင်ပြေတယ်..ကိုယ့်ကားဆိုတော့လည်း နင်းကန်မ မောင်းပါဘူး.. ညပိုင်း တက်ဆီဆွဲရင်လည်း ကြည်ကြည်လည်း ပျင်းလို့ဆိုလိုက်စီးတဲ့အခါလည်းစီးတယ်…အဲအခါမျိုးဆို လူကြည့်လိုက်တာပါ..မသင်ကာစရာ ပုံစံမျိုးဆိုရင်.. မလိုက်တော့ဘူး..ကြည်ကြည်ကလည်းပါလာ တေ့ာ သတိထားရတာပေါ့…
ကားကိုအိမ်ဖက်ကို မောင်းလာခဲ့တယ်…တာမွေ ဗိုလ်စိန်မှန်လမ်းဖက်ကိုချိုးလိုက်တော့… ညလုံးပေါက်ဖွင့်တဲ့ ABC Store ဆိုင်နားကိုရောက်တော့… ကော်ဖီမစ်အိမ်မှာကုန်နေတာကို သတိရလို့ ဝယ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးရတာနဲ့ ကားကိုရပ်လိုက်တယ်.. အဲအချိန်မှာ ကြည်ကြည်လည်းနိုးလာတယ်. “အကို ဘာဝယ်မလို့လဲ” “ကော်ဖီမစ်…နင်ကောဘာဝယ်ချင်သေးလဲ… ဝယ်ချင်တာရှိရင်လိုက်ခဲ့” ကျနော် ကားပေါ်က ဆင်းပီးစတိုးဆိုင်ထဲကိုဝင်သွားတယ်.. ဆိုင်ထဲမှာ အရောင်းဝန်ထမ်း အမျိုးသား ၂ ယောက်ရှိတယ်..ကျနော် လည်းကော်ဖီရှာပီး ပိုက်ဆံရှင်းမလို့ကောင်တာကိုသွားတော့…ဆိုင်ထဲကို ကြည်ကြည်ဝင်လာတယ်…ဝန်ထမ်း ၂ ယောက်ရဲ့မျက်လုံးတွေက ကျနော့်ဆီက နေ ကြည်ကြည်ဆီကို လှမ်းကြည့် လိုက်တယ်..ကျနော်လည်း လှမ်းကြည့်မိတယ်… ကြည်ကြည်က ကားပေါ်မှာ သူ့ဘရာဇီယာကို ကျနော်ချွတ်ထားတော့ တီရှပ်အောက်မှာဘရာဇီယာမပါတော့ဘူး…. အောက်က ဘာမှ မပါတဲ့ တီရှပ်ဝတ်ထားတဲ့ မိန်းက လေးတွေကို မြင်ဘူးမှာပေါ့…နို့ ၂လုံးက အောက်ကဘာမှ မထိန်းထား တော့လှုပ်လှုပ် လှုပ်လှုပ်နဲ့လေ…ရင်သားတွေက တင်းရင်းနေတော့… လှပတဲ့ မြင်ကွင်း ကလေးပေါ့ ဝန်ထမ်း ၂ ယောက်ရဲ့မျက်လုံးတွေက ကြည်ကြည်မြင်တာနဲ့ အရောင်တွေလင်းလက်သွားတယ်..ကျနော့မိန်းမမှန်းမသိကြဘူး…ထင်တယ်…ကျနော်တောင် ကြည်ကြည် ကိုယ့်မိန်းမကို ပစ်မှားချင်စိတ် တဖွားဖွားပေါက်လာအောင် ဆက်စီဖြစ်လွန်းတယ်…နို့သီးရာ လေးတွေ ထင်းနေတဲ့ တီရှပ် နဲ့မိန်းမကိုပြေးနမ်းချင်လောက်အောင်ကို ကျနော်ခံစားရတယ်..
“စိတ်ညစ်လိုက်တာအကိုရယ်…သေပါပီ” “ဘာခုမှ စိတ်ညစ်မနေနဲ့…ဘာမှ မဖြစ်သလိုနေလိုက်တော့…ဟိုကောင်တွေက နင့်ကို ကြည့်လိုက်တာ.. ပစ်မှားနေတာ..ငါ့ကိုနင့်ယောကျားမှန်းမသိဘူးထင်တယ်…” မိန်းကလေးတွေရဲ့သဘာဝကြောင့် သူနို့သီးတွေထင်းနေတာကို သူ့ရင်ဘတ်ရှေ့မှာ လက်နဲ့ကွယ်လိုက် တယ်…ကျနော်လည်းကြည်ကြည့်ကို ကြည့်ရင်းသနားလာတယ်…..တော်တော်ရှက်နေတာလေ…ရင်ထဲမှာ လည်း သာယာသလို ခံစားနေရ တယ်… ကြည်..ဘာမှ မဖြစ်သလိုနေ…လက်နဲ့လည်းကာမနေနဲ့… သွားကြမယ်..”ကျနော် က ကြည်ကြည်ကိုပြောရင်းသူ့ခါးကိုဖက်လိုက်တယ်…အမှန်က တော့ခါး အောက်ပိုင်းတင်ပါးအပေါ်ပိုင်းကို ပါ…ပိုင်စိုးပိုင်နင်းဖက်လိုက်တာ..ဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေ မြင်အောင်ကို ဖက်လိုက်တယ်… စိတ်ထဲက မင်းတို့ ပစ်မှားနေတဲ့အိုး လှလှ လေးကို ငါစိတ်တိုင်းကျ စားနေတာကို မင်းတို့ မြင်အောင်ကွလို့တောင် ပြောမိသေးတယ်… နို့သီးအရာတွေထင်းနေတဲ့တီရှပ်ကိုလက်နဲ့မကာတော့ဘဲ ရှက်ရှက်နဲ့ ဆိုင်ကောင်တာမှာ ပိုက်ဆံရှင်းနေတဲ့ ကိုယ့်မိန်းမကို ကိုယ်ချစ်လိုက်တာ..ဆိုင်ဝန်ထမ်း ၂ ယောက်စလုံးကတော့ ကြည်ကြည်ရဲ့ နို့တွေကို မကြည့်ဘဲမနေနိုင်ဘဲ ကြည့်နေကြလေရဲ့..ကိုယ့်မိန်းမရဲ့ ရင်သားအလှ လေးတွေကို ပြလိုက်ရတဲ့ကျနောက တော့ ဒီနေ့အဖြစ်က နောင် ကာမပင်လယ်ရေယဉ်ကြောမှာ ကျနော်တို့နှစ်ယောက် မြောပါတော့မဲ့အစ ဆိုတာအဲတုန်းက မတွေးမိခဲ့ပါခင်ဗျား Crd;
Tags:သူငယ်ချင်း ၂ ယောက်